Alien: Blackout 2.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0 လြန္ခဲ့ေသာ5လက
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများ: ဂြိုလ်သား၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောအဂြိုလ်သားအတွက်ဘဝကိုမှယူဆောင်သည်။ သေစေတတ်သော Xenomorph တင်ဆောင်လာသောတစ်ချိ Weyland-Yutani အာကာသစခန်းသင်္ဘောပိတ်မိနေစဉ်ကမဆုပ်အနစ်သင်နှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်း hunts အဖြစ်အသက်ရှင်လျှက်နေဖို့ကြိုးစားပါ။ ဘေးအန်တရာယျနဲ့ရွေးချယ်မှုအောင်နေဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောမုဆိုး Outsmart ။ ကစားသမားအာကာသစခန်း၏ပျက်စီးထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အားကိုးသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းဂိမ်း၏ရလဒ်ကိုပြောင်းလဲ, သေစေနိုင်သောအဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားရန်သင်္ဘောသားအဖွဲ့ဝင်များကစွန့်စွန့်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဝေးမှသာဘူတာရုံရဲ့အရေးပေါ်စနစ်များကို အသုံးပြု. ပို. ပို. စိန်ခေါ်မှုတာဝန်များကိုမှတစ်ဆင့်မန်ဒါ Ripley ရဲ့အမှုထမ်းလမ်းပြခြင်းဖြင့်ခုနစ်ခုကွောကျမကျ inducing အဆင့်ဆင့်ဆက်လက်ရှင်သန်။ တပါးနှင့်သူမ၏အမှုထမ်းနှစ်ဦးစလုံး၏မသေချာမရေရာခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်မန်ဒါနှင့်တစ်ခုလုံးကိုဘူတာရုံများအတွက်စုစုပေါင်းရှုံးနိမ့်စည်းကြပ်နိုင်ပါတယ်။
ဂြိုလ်သား: ဘဝတစ်ချက်ချင်းအတွက်အဆုံးသတ်နိုင်မည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများ, ရောနှောဂြိုလ်သားများနှင့်ထိတ်လန့်နှစ်ဦးစလုံးပရိတ်သတ်တွေရဲ့အတွင်းစိတ်အာရုံကြောစမ်းသပ်လိမ့်မည်ဟုတစ်မူထူးခြားတဲ့ကွောကျမကျ inducing ထိတ်လန့်ပရီမီယံမိုဘိုင်းဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်သန်သေ - တစ် holographic မြေပုံ, စောင့်ကြည့်ကင်မရာနှင့်ရွေ့လျားမှု tracker တွင်လုပ်ကိုင်ရန်သာအာကာသစခန်းရဲ့ကန့်သတ် power supply ကိုသုံးပြီး, ဝှက်ထားရှိနေဆဲခုနစ်ကွောကျမကျ inducing အဆင့်ဆင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမုဆိုးကနေသင့်ရဲ့အမှုထမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။
တပါး franchise အသစ်တစ်ခုအခနျး - ထိုဂြိုလ်သားရုပ်ရှင်နဲ့တပါးအကြားမန်ဒါ Ripley, Ellen Ripley ရဲ့သမီး၏စစ်ကိုင်းအောက်ပါဂြိုလ်သားဂိမ်းထဲမှာအသစ်မျြးအခနျးကွီး။
First Class ဂြိုလ်သားမိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံ - တစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာများနှင့် captivating ဂြိုလ်သားအတွေ့အကြုံ, ဿုံဘဝကိုဖို့ဂြိုလ်သားပုံပြင်ကိုယူလာ, မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။
ထပ်ကာထပ်ကာကွောကျရှံ့ခွငျးကြုံတွေ့ရ - ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနိဂုံးချုပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ကစားသမားအောင်ပွဲလိုက်ရှာအတွက် Xenomorph outlast မှကွဲပြားခြားနားသောနည်းဗျူဟာများနှင့်သီအိုရီကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်!
Alien: Blackout အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Alien: Blackout အား အခ်က္ျပပါ
detodounpocofull စတိုး 72 63.35k
လက်မှတ် SHA1: 13:3E:8C:59:EE:34:4A:48:3E:80:1A:22:45:10:4A:53:99:44:87:EE
အဖွဲ့အစည်း (O): D3Go